နောက်ထက်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားမယ်ဟုပြောလိုက်တဲ့သင်းသင်း (ရုပ်သံ) – Sharing
Bain Taw | August 17, 2020 | သတင္း | No Comments
လက်နဲ့ ပါးကဒဏ်ရားကိုပြောရင်တော့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားမှာဟုပြောလိုက်တဲ့သင်းသင်း (ရုပ်သံ)မယ်
လက်နဲ့ပါးကဒဏ်ရာကဘာဖြစ်တာလဲမပြောသေးဘူး…ပြော ရင်တော့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားမှာဟုပြောလိုက်တဲ့သင်းသင်း(ရုပ်သံ)Messengerကနေတစ်ဆင့်ကိုယ်ချင်းစာဖြည့်တွေးအားပေးနေကြတဲ့ပရိတ်သတ်တွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ရပ်တည်နေနိုင်တာလဲကျလည်းတစ်ရက်ပါဘဲဟု သင်းသင်းကပြောလိုက်ပါသည်…။
လဲမပြောသေးဘူးပြောရင်တော့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားမှာဟုသင်းသင်းဆိုမက်ဆင်ဂျာကနေတစ်ဆင့်ကိုချင်းစာဖြည့်တွေးအားပေးနေကြတဲ့လူတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ရပ်တည်နေနိုင်တာလဲကျလည်း တစ်ရက် ပါပဲဟု သင်းသင်းကဆိုသည်….
လတ်တလောဖြစ်ပျက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ ချက်တင်တွေဆိုတာလဲ အဟောင်းတေကို အသစ်ပြန်လုပ်နေကြတယ်လို့ သင်းသင်းပြောလိုက်သည်ဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်မှု့တွေရှိပါစေ သူ့ကိုအားပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကလဲ ကောလဟာလတွေကြောင့် စိတ်မညစ်ကြဖို့ ဒီ LIVE မှာ အားပေးစကားပြောပေးနေကြပါတယ်…။credit-လူတင်
လကျ နဲ့ ပါးက ဒဏျရာက ဘာဖွဈတာ လဲ မပွောသေးဘူး…ပွော ရငျတော့ သတငျး တဈပုဒျဖွဈသှားမှာ ဟု ပွောလိုကျတဲ့ သငျးသငျး (ရုပျသံ)
လကျနဲ့ပါးကဒဏျရာကဘာဖွဈတာလဲမပွောသေးဘူး…ပွော ရငျတော့သတငျးတဈပုဒျဖွဈသှားမှာဟုပွောလိုကျတဲ့သငျးသငျး(ရုပျသံ)Messengerကနတေဈဆင့ျကိုယျခငြျးစာဖွည့ျတှေးအားပေးနကွေတဲ့ပရိတျသတျတှကွေောင့ျပတျဝနျးကငြျကဘယျလိုတိုကျခိုကျတိုကျခိုကျရပျတညျနနေိုငျတာလဲကလြညျးတဈရကျပါဘဲဟု သငျးသငျးကပွောလိုကျပါသညျ…။
လကျနဲ့ပါးကဒဏျရာကဘာဖွဈတာလဲမပွောသေးဘူးပွောရငျတော့သတငျးတဈပုဒျဖွဈသှားမှာဟုသငျးသငျးဆိုမကျဆငျဂြာကနတေဈဆင့ျကိုခငြျးစာဖွည့ျတှေးအားပေးနကွေတဲ့လူတှကွေောင့ျပတျဝနျးကငြျကဘယျလိုတိုကျခိုကျတိုကျခိုကျရပျတညျနနေိုငျတာလဲကလြညျး တဈရကျ ပါပဲဟု သငျးသငျးကဆိုသညျ….
လတျတလောဖွဈပကြျထှကျပေါျခဲ့တဲ့ သတငျးတှေ ခကြျတငျတှဆေိုတာလဲ အဟောငျးတကေို အသဈပွနျလုပျနကွေတယျလို့ သငျးသငျးပွောလိုကျသညျဘယျလိုပဲတိုကျခိုကျမှု့တှရှေိပါစေ သူ့ကိုအားပေးကွတဲ့ ပရိတျသတျတှကေလဲ ကောလဟာလတှကွေောင့ျ စိတျမညဈကွဖို့ ဒီ LIVE မှာ အားပေးစကားပွောပေးနကွေပါတယျ…။credit-လူတငျ
ျမ၀တီတြင္ ကားတုိက္မႈ ျဖစ္ပြားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕က ေခၚယူထြက္ေျပး
အိမ္ေမြးေၾကာင္မႀကီးမွ ေၾကာင္(၃)ေကာင္ႏွင့္အတူေခြးထီေလး(၁)ေကာင္ ထူးထူးျခားေမြး